Zvaungaita Kuti Uve Baba Vakanaka: Mazano Mashanu Ari muBhaibheri
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bislama Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Lithuanian Malagasy Malayalam Myanmar Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese (Brazil) Punjabi Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
“Pane here chandisina kuita?” Uyu mubvunzo unogara uchinetsa murume anonzi Michael, * wokuSouth Africa. Pasinei nezvose zvaaiita kuti arere mwana wake zvakanaka, nguva dzose dzaanofunga nezvemwanakomana wake akapanduka uyo ane makore 19, anozvibvunza kuti pane zvimwe here zvaaifanira kuita kuti ave mubereki akanaka.
Asi murume anonzi Terry uyo anogara kuSpain, anoratidza kuti akabudirira pakurera mwanakomana wake. Mwanakomana wake Andrew, anoti: “Zvizhinji zvandichiri kuyeuka nezvababa vangu, mazuva avaindiverengera mabhuku, avaitamba neni uye avaienda neni kune dzimwe nzvimbo tiri vaviri. Vaiita kuti kudzidza kunakidze.”
Chokwadi chiripo ndechokuti kuva baba vakanaka hakusi nyore. Asi Bhaibheri rine mazano anogona kubatsira. Vanababa vakawanda vakaona kuti ivo nemhuri dzavo vakabatsirwa chaizvo pavakatevedzera mazano ari muBhaibheri. Ngatimbokurukurai mamwe emazano acho anogona kubatsira vanababa.
1. Iva Nenguva Nemhuri Yako
Sababa, zvii zvamunoita zvinoratidza kuti vana venyu vanokosha kwamuri? Zviri pachena kuti pane zvinhu zvakawanda zvamunoitira vana venyu zvakadai sekushanda nesimba kuti vawane chokudya uye pokugara pakanaka. Hamungaiti zvinhu izvi dai kuri kuti vana venyu havakoshi kwamuri. Asi kana musingapedzi nguva yakawanda nevana venyu, vanogona kupedzisira vava kuona sokuti munokoshesa zvimwe zvinhu zvakadai sebasa renyu, shamwari dzenyu kana kuti mitambo yamunofarira kudarika zvamunovaita.
Baba vanofanira kutanga riini kuva nenguva nevana vavo? Amai vanotanga kuva neukama hwakasimba nemwana wavo kubvira paanenge achiri mudumbu. Mwana ari mudumbu anotanga kunzwa, pashure pokunge pamuviri pava nemwedzi mina pabata. Panguva iyi baba ndipo pavanofanira kutanga kuita zvinhu zvinoita kuti vave noukama nemwana achiri mudumbu. Vanogona kuteerera kurova kunoita mwoyo wemwana, kukava-kava kwakanenge kachiita, kutaura naye uye kumuimbira.
Zvinotaurwa neBhaibheri: Munguva dzainyorwa Bhaibheri, vanhurume ndivo vainzi vadzidzise vana vavo. Vanababa vaikurudzirwa kuti vagare vachipedza nguva yakawanda nevana vavo, sezvinoratidzwa nemashoko ari muBhaibheri pana Dheuteronomio 6:6, 7 anoti: “Mashoko aya andiri kukurayira nhasi anofanira kuva mumwoyo mako; unofanira kuaroverera mumwanakomana wako uye utaure nezvawo paunogara mumba mako nepaunofamba mumugwagwa nepaunorara pasi nepaunomuka.”
2. Kurukura Nemhuri Yako Zvakanaka
Teerera wakadzikama usingavatsvakiri mhosva
Kuti munyatsokurukura nevana venyu munofanira kuva munhu anonyatsoteerera. Munofanira kudzidzira kuteerera musingakurumidzi kushatirwa.
Kana vana vako vachiziva kuti unokurumidza kugumbuka uye unongovatsvakira mhosva, zvichaita kuti vasanzwa vakasununguka kukuudza zviri pasi pemwoyo yavo. Asi kana ukavateerera wakadzikama, unenge uchiratidza kuti une hanya navo zvechokwadi. Vachabva vasununguka kukuudza zvavanofunga uye zviri mumwoyo yavo.
Zvinotaurwa neBhaibheri: Uchenjeri huri muBhaibheri hunoratidza kuti hunobatsira muzvinhu zvakawanda muupenyu. Somuenzaniso, Bhaibheri rinoti: “Munhu wose anofanira kukurumidza kunzwa, anonoke kutaura, anonoke kuva nehasha.” (Jakobho 1:19) Vanababa vanoshandisa zano iri romuBhaibheri vanokwanisa kukurukura nevana vavo zvakanaka.
3. Vatsiure Nenzira Yorudo Uye Varumbidze
Kunyange zvazvo ungagumbuka, kutsiura kwaunoita kunofanira kuratidza rudo uye kuti unoda kuti mwana wako ave neramangwana rakanaka. Zvinosanganisira kupa mazano, kudzidzisa uye kuranga.
Uyewo, kutsiura kunoshanda chaizvo ndokunge kana baba vagara vari munhu anorumbidza vana nguva dzose. Chimwe chirevo chekare chinoti: “Shoko rinotaurwa panguva yaro yakakodzera rakafanana nemaapuro endarama ari mundiro dzakavezwa dzesirivha.” (Zvirevo 25:11) Kurumbidza mwana kunoita kuti akure ane unhu hwakanaka. Vana vanokura vachinzwa vaine chiremerera kana vachirumbidzwa uye vachiratidzwa kuti vanokosheswa. Baba vanotsvaka mikana yokurumbidza vachaita kuti vana vavo vakure vaine chivimbo uye zvichakurudzira vana kuti varambe vachiita zvakanaka.
Zvinotaurwa neBhaibheri: “Imi vanababa, musashusha vana venyu, kuti varege kuora mwoyo.”—VaKorose 3:21.
4. Ida Uye Remekedza Mudzimai Wako
Mabatiro ayo baba vanoita mudzimai wavo, anoonekwa nevana. Rimwe boka revanoongorora makuriro anoita vana rinotsanangura kuti: “Chinhu chinokosha icho baba vangaitira vana vavo kuremekedza amai vevana ava. . . . Baba naamai pavanoremekedzana uye pavanoita kuti vana vazvione, zvinoita kuti vana vafare uye vanzwe vachidiwa.”—The Importance of Fathers in the Healthy Development of Children. *
Zvinotaurwa neBhaibheri: “Varume, rambai muchida madzimai enyu, . . . Mumwe nomumwe wenyu ngaadewo mudzimai wake sezvaanozviita.”—VaEfeso 5:25, 33.
5. Shandisa Mazano Anobva Kuna Mwari
Vanababa vanoda Mwari nemwoyo wose vanogona kupa vana vavo nhaka inokosha, kureva kuti ukama hwepedyo naBaba vavo vokudenga.
Pashure pemakumi emakore achirera vana vake vatanhatu, Antonio, uyo ari mumwe weZvapupu zvaJehovha akagamuchira tsamba yaibva kune mumwe wevanasikana vake yaiti: “Kuna Baba, Ndinoda kukutendai chaizvo nokundirera muchindibatsira kuti ndide Jehovha Mwari, ndide muvakidzani wangu uye ndizvide uye kuti ndive munhu akanaka. Makandiratidza kuti munoda Jehovha uye mune hanya neni. Makaita henyu baba nokuisa Jehovha pakutanga muupenyu hwenyu uye nokubata vana venyu sezvipo zvinobva kuna Mwari!”
Zvinotaurwa neBhaibheri: “Ida Jehovha Mwari wako nomwoyo wako wose nomweya wako wose nesimba rako rose. Mashoko aya andiri kukurayira nhasi anofanira kuva mumwoyo mako.”—Dheuteronomio 6:5, 6.
Chokwadi ndechokuti kune zvakawanda zvinodiwa kuti uve baba vakanaka kunze kwokuita zvinhu zvishanu zvataurwa izvi. Asi kunyange ukaita zvose zvaungagona kuti uve baba vakanaka, hazvirevi kuti uchabva wagona zvose. Asi kushanda nesimba kwauchaita pakushandisa mazano aya nenzira yorudo kuchaita kuti uve baba vakanaka. *
^ ndima 19 Kunyange kana murume akarambana nomudzimai wake, zvinokosha kuti arambe achibata amai vevana ava zvakanaka kuitira kuti vana varemekedze amai vavo.
^ ndima 25 Kana uchida mamwe mazano nezvemhuri, ona bhuku rinonzi Chakavanzika Chomufarwa Wemhuri, rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha, kana kuti enda paIndaneti pawww.jw.org pachikamu chinonzi “Mazano Okubatsira Mhuri.”
Baba Vakanaka Havati Havana Nguva
Sylvan, chizvarwa chokuBarbados, asi anoshanda kuNew York City achiita basa rokutyaira mabhazi uye anogara pamwe chete nomudzimai wake nevanakomana vatatu vari kuyaruka. Sylvan anotanga basa masikati kusvikira na3 kana 4 kwoedza. Musi weChina neChishanu haaendi kubasa asi Mugovera neSvondo anoshanda manheru. Asi basa rake harimutadzisi kuwana nguva yokuva nevana vake.
“Hazvisi nyore, asi ndinoedza,” anotsanangura kudaro Sylvan. “Ndinotofanira kuva nenguva yokukurukura nemumwe nemumwe wevanakomana vangu. Musi weChina masikati ndipo pandinokurukura nemwana mukuru paanenge adzoka kuchikoro. Musi weChishanu, ndipo pandinokurukura newechipiri. Muduku wacho ndinozokurukura naye Svondo mangwanani.”
Zvakanaka Zvinoitwa Nanababa
“Vanotamba neni uye vanondiverengera mabhuku manheru.”—Sierra, ane makore 5.
“Tiri pakati pokunakidzwa nokutamba baba vanobva vati, ‘Zvakwana, ngatichirongedza zvinhu zvatanga tichishandisa.’ Pane dzimwe nguva, pashure pokunge tamboshanda, vanobva vati, ‘Zvebasa ngatimbosiya timbonotamba.’”—Michael, ane makore 10.
“Baba havana kumbobvira vaita kuti basa ravo kana kuti zvimwe zvinhu zvivatadzise kubatsira mhamha mabasa epamba. Kunyange iye zvino vava nemakore akawanda varoorana vanogara vachibika, vachisuka ndiro, vachitsvaira mumba uye vanoratidzira rudo kuna mhamha.”—Andrew, ane makore 32.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Zvaungaita Kuti Uve Baba Vakanaka